(၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း – ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးမောင်မောင်လွင်၊ သာယာဝတီ(၂)
တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၄.၉.၂၀၁၉၊ ၁၃/၁−၁၂−၃
သာယာဝတီမြို့နယ်၊ မင်းကြီးကုန်း ကျေးရွာ၊ အလယ်တန်းကျောင်းအား အထက်တန်းကျောင်းခွဲအဖြစ်ကျောင်း အဆင့်တိုးပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။
ပြည်ထောင်စုသို့ ဆက်လက်တင်ပြ မည့် စာအမှတ်နှင့် ရက်စွဲတို့အား သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း။
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်တွင် အဆင့်တိုး လျှောက်လွှာများခေါ်ယူချိန်၌ကျောင်းအုပ် ကြီးနှင့် ကျောင်းကော်မတီဝင်များကို လျှောက်ထားစေပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
စာဖြင့် ပြန်လည် ဖြေကြားပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၉.၂၀၁၉၊ ၁၃/၁−၁၃−၄
ပေါင်းတည်မြို့နယ်တွင် အားကစားရုံ အသစ်တည်ဆောက်ပေးရန်အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိနှင့် အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့် နှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိ လိုကြောင်းနှင့် အစီအစဉ်မရှိပါက လက်ရှိအားကစားရုံအား ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘတ်ဂျက်တွင် လျာထားခြင်း မရှိသေးပါကြောင်းနှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာ နှစ်တွင် ထည့်သွင်းအဆိုပြုပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါကဆောင်ရွက်ပေး မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၉.၂၀၁၉၊ ၁၃/၁−၁၃−၅
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာမှတ်ပုံတင်ရယူ လျှောက်ထားနိုင်ရေး တိုင်းဒေသကြီး အစီအစဉ်ဖြင့် ဆရာအတတ်သင် ရက်တိုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း။
ပြည်ထောင်စုသို့ တိုက်တွန်းအကြံပြု တင်ပြပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။
တိုင်းဒေသကြီးအစီအစဉ်ဖြင့်ဆရာအတတ် သင် ရက်တိုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင် ရန် အစီအစဉ်မရှိသေးပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားအပ်ပါသည်။
မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကျော်ဇေယျ၊ အုတ်တွင်း(၁)
တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၉.၂၀၁၉၊ ၁၃/၁−၁၃−၆
အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊သရက်ပင်မောင်နှမ ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ပင်မောင်နှမ ကျေးရွာ (အ. မ. က)မူလွန်ကျောင်း အား အလယ်တန်းအဆင့် တိုးမြှင့်ပေး ရန်နှင့် လိုအပ်သောအဆောက်အဦ ဝန်ထမ်းအင်အားများ ချထားပေးနိုင် ရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်ကျောင်းအဆင့် တိုး လျှောက်လွှာခေါ်ယူချိန်တွင် လျှောက် ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော ကျောင်းအဆင့်တိုး သတ်မှတ်မူဘောင်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါက အခြေခံပညာဦးစီးဌာနသို့ ဆက်လက် တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် မြို့နယ်တန်းစီဇယားအမှတ်စဉ်(၂)၌ (၉၀× ၃၀)ပေ Steel Structure တစ်ထပ်လျာ ထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းး ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၆.၉.၂၀၁၉၊ ၁၃/၁−၁၄−၅
ပဲခူးမြို့နယ် သံစို့ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သံစို့ပင်မူလွန်ကျောင်းအား ကျောင်းဆောင်သစ်အဖြစ် ဆောက်လုပ်ပေး ရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း သည့်မေးခွန်း။
အန္တရာယ်ရှိ ကျောင်းဆောင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းအုပ်ကြီးများထံ ညွှန်ကြားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မြို့နယ် ဦးစားပေးအစီအစဉ်အရ ခွဲဝေပေးရန် လျာ ထားပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
တိုင်းပညာရေးမှူးမှ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ပဲခူးမြို့နယ်၊ပဲခူးမြို့ ပုဏ္ဏားစုရပ်ကွက် အ.ထ.က(ခွဲ)အားကျောင်းဆောင်သစ် တိုးချဲ့ချပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။